लगातार अवतारको सिक्वेल
प्रकाशित : बुधबार, बैशाख २५, २०७६१७:३२
फिल्म । हलिउड फिल्ममा सबै भन्दा लोकप्रिय फिल्म हो ‘अवतार’ । यस फिल्मले गरेको कमाइलाई अझै कुनै फिल्मले तोडन सकेको छैन भने यसको चर्चा पनि उत्तिकै भएको थियो । सन् २००९ को दिसेम्बरमा रिलिज भएको फिल्मले २.८ बिलियन बराबरको ब्यापार गरेर विश्वमै सबै भन्दा बढी कमाउने फिल्म बन्न सफल भएको छ । मार्भल स्टुडियोको निर्माण रहेको पछिल्लो फिल्म ‘एण्ड गेम’ ले यसको ब्यापारलाई तोड्ने अनुमान गरिएको छ । तर , तोडिसकेको छैन ।
एभेन्जर्सको व्यापार देखेर अवतार निर्माण कम्पनि डिजनीले पनि महत्वपूर्ण केहि फिल्मको निर्माण घोषणा गरेको छ , जसमा अवतारको ४ सिक्वेल समावेश छन् । आउँदो ९ वर्षमा दर्शकले अवतारको ४ सिक्वेललाइ हेर्न पाउनेछन् । अवतारको सिक्वेललाई दर्शक सन् २०२१ मा हेर्न पाउनेछन् , जसलाई निर्माण कम्पनिले आधिकारिता दिएको छ ।
सन् २०१९ मा स्टार वार्स् एपिसोड9– द राइज अफ स्काईवाकर , सन् २०२० मा क्रुएला एण्ड वेस्ट साइड स्टोरी , सन् २०२१ मा अवतार २ , सन् २०२२ मा स्टार वार्स सिरिज , सन् २०२३ मा अवतार ३ , सन् २०२४ मा स्टार वार्स सिरिज , सन् २०२५ मा अवतार ४, सन् २०२६ मा स्टार वार्स सिरिज , सन् २०२७ मा अवतार ५ रिलिज हुने बताईएको छ । यी सम्पूर्ण फिल्महरु बर्ष अन्त्य अर्थात क्रिसमसमा रिलिज हुनेछन् । निर्माण कम्पनि डिजनीले हरेक वर्षको अन्त्यमा दर्शकलाई मनोरंजन प्रदान गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । (एजेन्सी)
दुइ सय करोड क्लबमा विक्की
साइली : फस्टलुकसँगै डेट घोषणा
‘कागजपत्र’ मा कथा बोकेको गीत (भिडियो)
ऋतिक र कंगनाको भिडन्त पक्का
मदिराको लत लागेपछि !
डान्सिङ नम्बर लिएर आए दिनेश
मेक्सम आउट ?
दिपाशाका साथ बारमा झुमे बुद्धि र अग्रज (भिडियो)